Sidee Amarka Fulinta saamayn doonaa qaxooti? Macluumaadka ku 16 luqadood | Refugee Center Online
Sida loo dalbado shaqo on portal shaqo
Waxbarashada aasaasiga ah iyo dugsiga sare
Waa maxay GED®
Waa maxay TASC
Waa maxay HiSET ™
asalka dhaqankooda profiles on ardayda qaxootiga iyo soo galootiga
Class Citizenship Free
Waa maxay wareysiga jinsiyadda ah?
Waa maxay su'aalaha waxaa lagu weydiin doonaa wareysiga dhalashada my?
ogolaanshaha Qaxootiga 2019
isukeenidda qoyska - in America keena Ehelkiinna
dukumentiga safarka ee qaxootiga iyo xuquuqda safarka
lagu hayo Immigrant: caawin shakhsiyaadka dalbaneysid magangelyo oo ku taalla xuduudda-US Mexico
Waalidnimada iyo barbaarinta carruurta
Sidee in la wado? Macluumaadka ku saabsan sida loo wado ee Maraykanka
guryaha Refugee: sida loo helo meel ay ku noolaadaan
Sida loo bixiyo canshuurta ee Maraykanka
Sidee Executive Order Madaxweynaha Trump ee saameyn doonto qaxootiga ee America?
Updates muhiim ah oo ku saabsan Isbeddelada Maamulka Trump ee Latest si Refugee dejinta iyo Sidee Isbedelada Kuwani kuu saameyn doono
Maamulka Trump ayaa siyaasad cusub oo saamayn kara dib u dejinta qaxootiga ee dalka Mareykanka.
Waxaan filaynaa in siyaasadan waxaa lala tiigsan doonaa nidaamka maxkamadda Maraykanka. Currently macluumaadka hoose waa sax laakiin waxaa laga yaabaa in ugu dhakhsaha badan mar kale la beddelo. Waxaan casriyeyn doona macluumaadkaaga this sida ugu dhaqsaha badan aan ka baran ku saabsan wixii isbeddel ah.
Saddex updates muhiim ah
1) on April 25, 2018, Maxkamadda Sare ee Maraykanka maqlay doodaha ku saabsan amarada fulinta in xadiday socdaalka Maraykanka ka yimi dalalka qaarkood ee. Looyarka General Mareykanka ayaa sheegtay xayiraadda safarka waa dastuurka, laakiin kooxaha xuquuqda u soo guuray weydiiyay Maxkamadda Sare ay uga soo horjeedaan mamnuucidda.
The xayiraadda safarka hadda cidhiidhya safarka ka ah toddoba quruumood - Iran, Liibiya, Suuriya, Yemen, Soomaaliya, Venezuela iyo North Korea. Dadka ka yimid wadamada laga yaabaa in aan soo socdaalo Maraykanka, iyo dad badan oo looma oggola in ay yimaadaan shaqo ama waxbarasho ama fasaxa.
update: on June 26, Maxkamadda Sare go'aan in ay oggolaadaan in xayiraadda safarka. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan go'aanka Maxkamadda Sare ee ku saabsan xayiraadda safarka.
2) Checks Security kordhay bilaabi doonaan dhammaan qaxootiga.
Maamulka sii kordhaya jeegaga ammaanka iyo baaritaanka asalka qofka. Tani waxaa looga baahan doonaa dhammaan qaxootiga, oo ay ku jiraan kuwa horay u maray baaritaan ammaanka.
3) Maamulka ayaa si ku meel gaar joojiyay (hakad) "Ka dib-u-soo biir" codsiyada. (Kuwanu waa codsiyada sharci in la keeno xaaskaaga ama caruurta Maraykanka).
Maamulka ayaa si ku meel gaar joojiyay (hakad) dhammaan codsiyada FTJ I-730. Annagu garan mayno marka "Ka dib-u-soo biir" codsiyada mar kale bilaabi doonaan.
Saxiix Up for Our Newsletter
Heli emails macluumaad muhiim ah ee qaxootiga